Ezekieri 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Zvino mugore rechimakumi matatu, mumwedzi wechina, pazuva rechishanu romwedzi wacho, pandakanga ndiri pakati pevanhu vakatapwa+ pedyo norwizi rwaKebhari,+ matenga akavhurika,+ ndikatanga kuona zvakaratidzwa naMwari.+ 2 Pazuva rechishanu romwedzi wacho, imo mugore rechishanu rokutapwa kwaMambo Jehoyakini,+ 3 shoko raJehovha rakauya+ zvakananga kuna Ezekieri+ mwanakomana womupristi Bhuzai munyika yevaKadheya+ pedyo norwizi rwaKebhari, uye ruoko rwaJehovha rwakauya pamusoro pake+ ari munzvimbo iyoyo. 4 Zvino ndakaona, uye tarira! mhepo ine mvura+ yakanga ichibva kuchamhembe, gore gobvu guru+ nomoto+ waivaima, uye rakanga richipenya kumativi ose, pakati paro paiva nechimwe chinhu chakaita sechinhu chakagadzirwa nendarama nesirivha, chaiva mukati momoto wacho.+ 5 Mukati mawo maiva nezvinhu zvakaita sezvisikwa zvipenyu zvina,+ uye zvairatidzika seizvi: zvakanga zvakaita somunhu wepanyika. 6 Chimwe nechimwe chaiva nezviso zvina,+ uye chimwe nechimwe chazvo chaiva nemapapiro mana.+ 7 Tsoka dzazvo dzakanga dzakatwasuka, pasi petsoka dzazvo pakanga pakaita sepasi petsoka dzemhuru;+ uye dzaipenya sokupenya kunoita mhangura yakabwinyiswa.+ 8 Kumativi azvo mana pasi pemapapiro azvo paiva nemaoko omunhu,+ uye zvose zviri zvina zvaiva nezviso zvazvo nemapapiro azvo.+ 9 Mapapiro azvo akanga akabatana. Zvaisatendeuka pazvaifamba; chimwe nechimwe chaifamba chakananga mberi.+ 10 Kana kuri kutaridzika kwezviso zvazvo, zvose zviri zvina zvaiva nechiso chomunhu+ nechiso cheshumba+ kurudyi,+ zvose zviri zvina zvaiva nechiso chenzombe+ kuruboshwe;+ zvose zviri zvina zvaivawo nechiso chegondo.+ 11 Ndizvo zvakanga zvakaita zviso zvazvo. Mapapiro+ azvo akanga akatambanudzirwa kumusoro. Chimwe nechimwe chaiva nemaviri akabatana, uye maviri akanga akafukidza miviri yazvo.+ 12 Chimwe nechimwe chaifamba chakananga mberi.+ Zvaienda chero kupi zvako uko mudzimu waida kuenda.+ Zvaisatendeuka pazvaifamba.+ 13 Kana kuri kutaridzika kwezvisikwa zvipenyu zvacho, chitarisiko chazvo chakanga chakaita semazimbe omoto anobvira.+ Chimwe chinhu chakaita sezhenje romoto+ chakanga chichienda mberi nokudzoka shure pakati pezvisikwa zvipenyu zvacho, moto wacho waipenya, uye mukati momoto wacho maibuda mheni.+ 14 Zvisikwa zvacho zvipenyu zvaiita semheni sezvazvaienda mberi nokudzoka shure.+ 15 Pandakaramba ndichiona zvisikwa zvacho zvipenyu, chokwadi, tarira! kwaiva nevhiri rimwe chete raiva panyika kurutivi rwezvisikwa zvipenyu zvacho,+ pedyo nezviso zvina zvechimwe nechimwe.+ 16 Kutaridzika kwemavhiri acho+ nokugadzirwa kwawo, zvakanga zvakafanana nokupenya kwedombo rekrisoriti;+ uye ose ari mana akanga akafanana. Kutaridzika kwawo nokugadzirwa kwawo zvakanga zvakangoita sezvinoita vhiri kana riri mukati merimwe vhiri.+ 17 Paaifamba, aifamba nemativi awo mana.+ Akanga asingatendeukiri kumwe paaifamba.+ 18 Marimu awo akanga akareba zvokuti aityisa; uye marimu awo ose ari mana akanga azere nemaziso kumativi ose.+ 19 Paifamba zvisikwa zvacho zvipenyu, mavhiri acho aifambawo ari parutivi pazvo, uye zvisikwa zvipenyu zvacho pazvaisimudzwa zvichibva panyika, mavhiri acho aisimudzwawo.+ 20 Zvaienda chero kupi zvako uko mudzimu waida kuenda, ikoko uko mudzimu waida kuenda; uye mavhiri acho aisimudzwawo ari pedyo nazvo, nokuti mudzimu waishanda pachisikwa chipenyu waiva mumavhiri. 21 Pazvaifamba, iwo aifambawo; pazvaimira, iwo aimirawo; uye pazvaisimudzwa zvichibva panyika, mavhiri acho aisimudzwawo ari pedyo nazvo, nokuti mudzimu waishanda pachisikwa chipenyu waiva mumavhiri.+ 22 Pamusoro pemisoro yezvisikwa zvacho zvipenyu paiva nechinhu chakaita senzvimbo huru+ chakafanana nokuvaima kwemvura yakaita chando inotyisa, chakatambanudzwa pamusoro pemisoro yazvo.+ 23 Mapapiro azvo akanga akatwasanudzwa pasi penzvimbo yacho huru, rimwe rakabatana nerimwe racho. Chimwe nechimwe chaiva nemapapiro maviri aifukidza miviri yazvo kurutivi rwuno uye chimwe nechimwe chaiva nemaviri aifukidza kurutivi urwo. 24 Ndakanzwa kutinhira kwemapapiro azvo, kutinhira kwakafanana nokwemvura zhinji,+ kwakafanana nokutinhira kwoWemasimbaose, pazvaifamba, iyo mheremhere+ yakaita soruzha rwevanhu vakadzika musasa.+ Pazvaimira, zvaidzikisa mapapiro azvo pasi. 25 Zvino inzwi rakanzwika pamusoro penzvimbo yacho huru yaiva pamusoro pemisoro yazvo. (Pazvaimira, zvaidzikisa mapapiro azvo pasi.) 26 Pamusoro penzvimbo yacho huru yaiva pamusoro pemisoro yazvo paiva nechimwe chinhu chakaita sedombo resafaya,+ chakaita sechigaro choumambo.+ Pamusoro pechinhu chakaita sechigaro choumambo paiva nomumwe munhu aiita sokunge kuti munhu wepanyika aiva pamusoro pacho,+ nechokumusoro. 27 Zvino ndakaona chimwe chinhu chakanga chakaita sokupenya kwechinhu chakagadzirwa nendarama nesirivha,+ chakaita somoto mukati macho mose,+ kubvira maiita sokunge muhudyu make zvichikwira; uye kubvira maiita sokunge muhudyu make zvichidzika ndakaona chimwe chinhu chakaita somoto, uye aipenya kumativi ose. 28 Kwaiva nechimwe chinhu chakaita somuraraungu+ unobuda mugore gobvu pazuva rinonaya mvura zhinji. Ndizvo zvakanga zvakaita kupenya kwacho kumativi ose. Kwakanga kwakaita sokubwinya kwaJehovha.+ Pandakakuona, ndakabva ndawira pasi nechiso changu,+ ndikatanga kunzwa inzwi romunhu aitaura.